I-PRL-8-53 powder (51352-87-5) hplc =98% | Yenza i-SARMS powder
/ iimveliso / SARMS / IPL-8-53 powder
SKU: 51352-87-5. Udidi: SARMS
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwi-gram ukuya kwi-mass order ye-PRL-8-53 powder (51352-87-5), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-PRL-8-53 powder (igama lekhemikhali i-Methyl 3- (i-2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate) yinkampani ye-nootropic eyenziwe kwi-1972 kunye ne-patent omiselwe kwi-1975 ngasekupheleni kukaDkt Nikolaus Hansl, i-neuropharmacologist kwiYunivesithi yaseCreighton e-Omaha, eNebraska.
I-PRL-8-53 powder ividiyo
I-PRL-8-53 powder ezisemqoka
igama: I-PRL-8-53 powder
I-molecular Formula: C18H22ClNO2
Isisindo somzimba: 319.82578
I-PRL-8-53 powder ekwenzeni umsebenzi wengqondo kunye nokomeleza okungakumbi
I-Methyl 3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate
2. I-PRL-8-53 powder Ukusetyenziswa:
Ukufundwa komntu kuphela kwi-PRL-8-53 powder kusekelwe ekungeneni kwesinye i-5 mg dose. Akukho datha malunga nokuphumelela okanye ubunobungozi beyiphi na enye imilinganiselo ebantwini.
Isilumkiso kwi-PRL-8-53 powder
Ngokutsho kobungqina beerati, i-PRL-8-53 powder ibonakala iyinto ye-dopamine agonist. Oku kuthetha ukuba inokuphucula i-dopamine receptors kwaye isetyenziswa rhoqo kwizigulane zikaParkinson. Kubantu abangenayo le mveliso, ingaba yecala elingathandekiyo le-PRL-8-53 powder eluhlaza.
Izifundo zetyhefu kwizigulisi zibonisa umyinge ophezulu kunye namaxabiso e-LD50, kodwa kubonakala ukuba kukho ubungqina obuninzi. Kwakhona, kubonakala ukuba umphumo wegalelo we-PRL-8-53 powder ukunciphisa umenzi wemoto ngaphakathi kwengqondo.
I-PRL-8-53 Mechanism of Action
Indlela yokwenza oku ku-nootropic okwamanje ayiyaziwayo kodwa inokuthi, inxalenye, ilala kunye neendlela zokwenza izinto. UDkt. Hansl, umdali wekhampani uxoxa ngephepha lePal Delta Kappan ukuba i-PRL-8-53 powder iphakamisa impendulo yengqondo kwi-acetylcholine, kwaye i-compound ayikho into ekhuthazayo. Ilungelo lobunikazi be-PRL-8-53 powder eluhlaza lithetha iindlela zokucoca.
Uvavanyo lwezilwanyana olubandakanya iigulane lubonisa i-4mg / KG yandisa i-apomorphine (i-dopamine agonist) yanda i-gnawing i-rnwing in rats, iphakamisa ukuba i-PRL-8-53 powder ebomvu kwinqanaba elithile i-dopamine agonist. Isifundo esifanayo saqulunqa ukuphucula ukufunda ekukhuselweni kwimeko. Le notropic ayinakwandisa izenzo ze-amphetamine kwiigulane kwaye azibonakali zivimbela umsebenzi we-MAO. Isifundo esisodwa kubantu sichaza ngokufutshane ukuba i-PRL-8-53 powder eluhlaza inokukhupha i-dopamine ukukhutshwa kwaye ibangele ukuphazamiseka kwe-serotonin.
Iinzuzo zeRPR-8-53 powder:
Uphando olulodwa olupapashiweyo lwe-PRL-8-53 powder lubonisa ukuphuculwa kancinci kokufumana igama ngexesha lomsebenzi wokukhumbula. Abathathi-nxaxheba banikwa i-5mg ye-PRL-8-53 i powder 2 iiyure ngaphambi kokuvavanywa kwaye ke babuzwa ukuba balalele ukurekhoda kwamazwi e-12 ngokulandelelana ngokulandelelanayo kwaye bafunde ngamaxesha ezayo (kungekudala emva kokuvavanywa, ngosuku olulandelayo kunye ne-4 emva kweentsuku). Izibonelelo ezincinci zifunyenwe ukufumana ngokukhawuleza, kodwa ukuphuculwa kwe-80% kwagqitywa ngabantu abavavanywa kamva kuba ngubani oye wafumana amanqaku amabi ukuvavanya (i-6 / 12 amagama ngokuchanekileyo okanye ngezantsi).
(2) Izinzuzo ezingashicilelwa (ezinokwenzeka) Iimpawu zokuSebenza - I-Geometric Pattern Exercise
Okuthakazelisayo, umdali wendalo uxoxisana nezinye izilingo ezibonakala zingekho okanye ezingashicilelwa. Kwincwadi epapashwe kwi-1978, uDkt. Hansl uthe i-PRL-8-53 powder yenza amanqaku aphuculweyo amanqaku kwi-geometric pattern. Abathathi-nxaxheba baboniswe uluhlu lweepateni zejometri kwaye bacele ukuwadweba kwimemori, ukuphuculwa kwamanani okubaluleka.
(3) I-Arithmetic ye-Arithmetic Exercise
Kwinqaku elifanayo, uDkt Hansl uchaza ukusetyenziswa kweengcamango ezinokwakheka kwengqondo apho abathathi-nxaxheba bekufuneka bakhuphe i-7, bengeze i-1, basuse i-7, bangeze i-2 kwaye njalo ukwenzela ukuba kufakwe inombolo "injongo". Amaxesha amancinci kunombolo ye "njongo" yaphawulwa kwiqela le-PRL-8-53 eluhlaza.
(4) Ukuvavanya kweeNzululwazi
UDkt. Hansl uxoxa ngokuvavanywa apho izifundo zicelwa ukuba zenze amagama avela kuluhlu lwamagama kunye namachaphaza. Umzekelo "i-UR" kwakufuneka iguqulwe ibe yiliphi igama ngokufaka iileta ekuqaleni nasekupheleni kwegama, ngelixa lifaka amachaphaza ngencwadi. "UR" ingaba "okwangoku" umzekelo. Uphuculo olubalulekayo lufunyenwe kubathathi-nxaxheba ababethabathe iziyobisi.
I-PRL-8-53 Powder Raw
I-PRL-8-53 yePowder Marketing
Indlela yokuthenga i-PRL-8-53 powder esuka kwi-AASraw
I-PRL-8-53 I-Raw Powder Recipes: